Shina Hemiplegic Walker ho an'ny fanamboarana sy mpanamboatra olon-dehibe | Hongzhu
Properties Famatsiana fitsaboana fanarenana
endri-javatra Azo zahana sy azo havaozina ary mora miovaova
Material Stainless vy fitaovana
Color Volafotsy sy manga, voasary, mainty
Application Olon'ny ambany tongotra sy ny fanelingelenana
Wheel Tsy mahatra ny tany ny mangina
feno Boaty boaty
* karazana famaky roa, afaka manitsy ny sakany araka ny marbra, mety amin'ny vatana samy hafa.
* marefo poleta poloney malefaka, tsy mahazo aina ary tsy mipetaka, tsy manimba ny vatana.
* vita amin'ny alloy aluminium avo
* azo ovaina ny haavon'ny mpandeha fanarenana
* hamafiso ny vatan-dàlana mba hahatonga mafy ny firafitra sy maharitra, miaraka amin'ny 100kg ambony indrindra.
* 360 degre mihodina amin'ny kodiarana iraisampirenena, azo antoka ary mora fifehezana
* sisan-tsoavaly haingam-pandeha ambony, mahazo aina, manga matevina, fanesorana azo esorina.
* takelaka seza mainty PU tsy mahazo aina no ahafahan'ny olona miala sasatra na dia reraka
* Ny mpitsangantsangana misy tamberin'entana misy kodiarana sy lafiny kodiarana dia azo antoka kokoa noho ny mpandeha mahazatra.
* Ny bracket anti-rollover miaraka amin'ny kodiarana dia azo esorina
* famolavolana kodiarana vita amin'ny olombelona, ​​miaraka amin'ny prima, mety amin'ny olona tsy manana hery be loatra.
* fanomezana tsara indrindra ho an'ny loholona sy namana misy kilema. Ento miverina any ivelany izy ireo.
* Ny haavon'ny tsipika mety
* Mandeha an-kalalahana
* Ny roa axillaries roa azo ampifanarahana
* Miasa ny brakes
* Fantsona mitazona tsindrona
* Takelaka seza fako
Previous: Hemiplegic Walker ho an'ny olon-dehibe
Manaraka: Hemiplegic Walker ho an'ny ankizy
Walker azo zahana miaraka amin'ny seza
Loholona Walker Miaraka amin'ny Seat
Walker mpitsabo amin'ny seza
Ireo mpitsangatsangana mpitsabo miaraka amin'ny kodiarana sy seza
Walker Miaraka amin'ny haavon'ny seza azo tanterahina